2. Na-ahụ ndị ọzọ n’anya. Ihe mbụ ị ga-eme bụ ibido gosiwa mmadụ ole na ole na ị hụrụ ha n’anya. Otu nwa okorobịa aha ya bụ Jorge kwuru, sị: “Naanị ịjụ ndị ọzọ otú ha mere ma ọ bụ otú ọrụ ha si aga ga-eme ka ị matakwuo ha.”
3. ‘Ka ihe banyere onye ọzọ na-emetụ gị n’obi.’ (1 Pita 3:8) Ọ bụrụgodị na i kwetaghị ihe onye ọzọ na-ekwu, medaa obi chere ka o kwuchaa. Kwuo gbasara ihe ndị gị na onye ahụ kwekọrịtara na ha. Ọ bụrụ na i chere na ọ dị mkpa ka i kwuo uche gị n’ihe ụfọdụ unu na-ekwekọrịtaghị, meda obi kwuo ya; ekwukwala ya otú ọ ga-akpasu onye ahụ iwe.
Ihe ga-enyere gị aka: Na-agwa ndị ọzọ okwu otú gịnwa ga-achọkwa ka ha si na-agwa gị. Ọ bụrụ na gị na ndị mmadụ na-arụkarị ụka, gị ana-edowe ọnụ otú ọ bụla dị gị mma agwa ha okwu, na-akparị ha, jiri ha na-eme ihe ọchị ma ọ bụ na-egosi ha na ị ka ha bụrụ ndị ezi omume, ọ ga-eme ka ha na-agbara gị ọsọ. Ma, ha ga na-abịa gị nso ma ọ bụrụ na i mee ‘ka okwu gị dịrị n’amara mgbe niile.”—Ndị Kọlọsi 4:6.